'ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းသောယောက်ျား၊ လိင်တူချစ်သူ Porn' နှင့်အခြား ဦး နှောက်မြေပုံနက်နဲသောအရာ (၂၀၁၀) - သင့် ဦး နှောက်တွင် Porn
'' လမျးဖွောငျ့လူတို့, ဂေး Porn 'နှင့်အခြားဦးနှောက်မြေပုံ Mystery (2010)
HOCD များအတွက် exposure ကုထုံး?
ပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှု: လေ့လာမှု ၃၀ ကျော်သည်တွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံမှု)၊ ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
အတုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ wiring အတွက်အော်ဂဇင်၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ?
ပြီးခဲ့သည့်ရာစုအများစုအဘို့, အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဦးနှောက်တော်တော်များများထားခဲ့ကြသည်ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ အခုတော့မကြာသေးခင်ကမှ neuroscience ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက် suprisingly ပလပ်စတစ်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတစ်လျှောက်လုံး။ ကျွန်တော်တို့ကိုမလိုချင်တဲ့ဝါယာကြိုး sidestep ကူညီနည်းစနစ်သင်ယူခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့တောင်မှလုပ်နိုင် ပြန်လည်လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာကြိုးဖြစ်စဉ်ကိုညွှန်ကြားထင်ရသောအံ့ဖွယ်ရလာဒ်များ -with ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုမည်သို့ကြိုးနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်သည်ကိုနားလည်ရန်အဓိကနိယာမမှာ“ အတူတကွဝါယာကြိုးများအတူတကွအလုပ်လုပ်သောအာရုံခံများ” ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအရာနှစ်ခုသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်၎င်းတို့အားအမှန်တကယ်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုများဖြင့်မကြာခဏဆက်စပ်သည်။ ဆက်စပ်ဖြစ်ရပ်များပိုမိုပြင်းထန်လေ (သို့) ၎င်းတို့သည်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်လေလေဝါယာကြိုးပိုမိုခိုင်မာလေလေဖြစ်သည်။ အပြုအမူတစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအတွက်မြှုပ်နှံထားသည့်အာရုံကြောဆဲလ်အုပ်စုများကိုတစ်ခါတစ်ရံ“ ဦး နှောက်မြေပုံ” ဟုခေါ်သည်။
orgasm ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်အလွယ်တကူဆက်စပ်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခွအေနက (နှင့် arousal) ဝါယာကြိုးဒါမှအရသာတစ် neurochemical ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ -Norman Doidge အတွက်ကရှင်းပြသည်ဥပမာအားဖြင့်, အဖြစ် ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်,
ညစ်ညမ်းမှာရှာဖွေနေ၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများမှာယောက်ျား t ကိုနဲ့တူ uncannily ခဲ့ကြသည်သူသည် NIH ၏လှောင်အိမ်များတွင်ကြွက်များကိုနှိပ်ပြီး dopamine သို့မဟုတ်၎င်းနှင့်တူသောအရာတစ်ခုရရန်ဘားကိုနှိပ်သည်။ သူတို့သည်မသိခဲ့ကြသော်လည်းလိုအပ်သောအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသင်တန်းများသို့လည်းသွေးဆောင်ခံခဲ့ရသည် ဦး နှောက်မြေပုံများပလပ်စတစ်ပြောင်းလဲမှုသည်။ …သူတို့ဟာလိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားရပြီးတစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါအော်ဂဇင်တစ်ခုရသည့်အခါ“ dritamine of spritz” ဆုချီးမြှင့်တဲ့ neurotransmitter ကသင်တန်းများအတွင်း ဦး နှောက်အတွင်းရှိဆက်သွယ်မှုများကိုခိုင်မာစေခဲ့သည်။ [“ အရသာနှင့်ချစ်ခြင်းများကိုရယူခြင်း” အခန်းမှ
ရှင်းနေသည်မှာအော်ဂဇင်ကအနာဂတ်အာရုံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သတိအသိပညာမပါဘဲညွှန်ကြားထားသည်အဘယ်မှာရှိဘို့ဂယက်နှင့်အတူ, ဦးနှောက်မြေပုံပုံဖော်နိုင်သောဤသို့သောအစွမ်းထက်စစ်ကူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကကျနော်တို့လိင်စိတ်နိုးထတစ်ဦးအထူးသဖြင့်နည်းလမ်းသို့ရေငုပ်မတိုင်မီရှေ့တွင်ထင်ချင်အံ့သောငှါအကြံပြုထားသည်။
ခြင်းကိုမနှစ်သက်နိုင် လည်း ဦးနှောက်မြေပုံများအားပြောင်းလဲပစ်။ Doidge ကသူ့လူနာတစျဦး၏လိင်မှုဆိုင်ရာအရသာအဆင့်တဆင့်သှားသောမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ (p.95) သူတစ်ဦးတည်းသာအဆင့်အာရှလိင်မိတ်ဖက်ဖို့, သာအခြားအာဖရိကန်မိတ်ဖက်ဖို့ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမှု၌သူသညျမိမိပျော်ရွှင်မှုကိုနှင့်အတူလိင်အပျေါမှီခိုသေချာခဲ့သည် ထို လူမျိုးရေးအုပ်စု။ သို့သော်သူသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ (တစ်ခုမှာအံ့ဘွယ်သောအမှု ဘယ်မှာ သူသည်လူမျိုးငါးမျိုးလုံးအတွက်သူ၏လိင်ဆန္ဒကိုကုန်လွန်သွားသောအခါဆင်းရဲသား၏အရသာသည်ပြောင်းလဲသွားသည်။ )
ဝိရောဓိလွန်း အလွန် အော်ဂဇင်ကသူ့ခြင်းကိုမနှစ်သက်နောက်ကွယ်မှခဲ့ကြပေမည်။ လိင်မွတ်မပြေနိုင်သောအဆိုပါလောင်စာဟန် Coolidge Effectသောသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကုန်ကြပါပြီ, ဒါကြောင့်သူတို့ကဝတ္ထုအိမ်ထောင်ဖက်သှေးဆောငျကိုရှာဖွေသောအိမ်ထောင်ဖက်၏တာယာမှနို့တိုက်သတ္တဝါများ၏သဘောထားကိုဖြစ်ပါတယ်။
တူညီသောမျဉ်းကြောင်းများအရမိုးသည်းထန်စွာရွာသူရွာသားများသည်သည်းခံမှုသည်သူတို့၏အစောပိုင်းအရသာများအတွက်တည်ဆောက်ခြင်းသည်ပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုကိုရှာဖွေသည့်နေရာတွင်လမ်းကြောင်းအသစ်များသို့ရွေ့လျားနေသည်ကိုတစ်ခါတစ်ရံသတိပြုမိကြသည်။ ယခင်သူတို့၏ ဦး နှောက်မြေပုံများနှင့်ကိုက်ညီသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေမည့်အစား၊ များစွာသောသူတို့သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ“ တားမြစ်ထားသော” နှင့်“ ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်” လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာပိုမိုကြီးမားသောအစွမ်းကိုပေးသောကြောင့်၊ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုစီသည်အရသာအသစ်များကို ဦး နှောက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ (အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်အတိတ်ကညစ်ညမ်းမှုများနှင့်မည်သို့ကွာခြားသည်ကိုဖတ်ပါ။ ) porn ထိုအခါနှင့်အခုဆိုရင်: ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်)
Doidge ကအသုံးပြုသူအချို့၏ညစ်ညမ်းသောရွေးချယ်မှုများဖြစ်သောရိုက်တာခြင်းသို့မဟုတ်လွှမ်းမိုးခြင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများသည်မသိစိတ်၏မသိမသာဖြစ်သောသွယ်ဝိုက်။ ကလေးငယ်များ၏အမှတ်တရများနှင့်ဆက်စပ်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ “ မှန်သော” porn ဖြင့်အစပျိုးခဲ့ပြီးအော်ဂဇင်ဖြင့်အားဖြည့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊
လုံးဝမျှော်လင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာပျေါပေါကျနိုငျသညျ။ တစ်ဦးထက်ပိုဆင်းရဲသောသူသည်ဖြောင့်အပေါင်းတို့သည်သူ၏ဘဝကိုခဲ့သူကိုကောင်လေးအဘယ်သူရိုးရိုးသားသားဖြစ်တော်မူသည်ယုံကြည်နေပါတယ် ဆဲ ဖြောင့်ဖြောင့်လိုက်၊ ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်လိင်တူချစ်သူ porn သည်ရုတ်တရက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟူသောအချက်ကြောင့်တုန်လှုပ်သွားသည်။ ဒါကသာငုပ်လျှိုးနေတဲ့လိင်တူဆက်ဆံခြင်းလား? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဟာလိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူတွေရဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုရပ်တန့်မသွားစေနိုင်လို့ပါ။ ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်လိင်တူချင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်တူခြင်းသဘောတူခြင်းများကိုလိင်တူချင်းလိင်တူချင်းဆက်ဆံခြင်းသို့ကူးပြောင်းခဲ့သည်။ အခြားသူများမှာမူစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် မှနေ၍ ညစ်ညမ်းဇာတ်လမ်းများကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းအထိဗီဒီယိုအလံများဖြင့်သာရွေ့လျားနေသည်ဟုခံစားရရန်စိတ်ဒဏ်ရာရကြသည်။
hypersexuality ဤပြောင်းလဲတစ်ကဏ္ဍမှပါပါသလား ၏အမျိုးမျိုးသောသာဓကကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာမြားတှငျပွောငျးလဲ ပေးထားသောလူနာအတွက် (လိင်တူဆက်ဆံဖို့လိင်ကွဲမှ) dopamine agonist မူးယစ်ဆေးဝါးများ ပါကင်ဆန်နှင့်နာမငြိမ်သောခြေထောက်များအတွက်။ အချို့သော dopamine ဆေးများသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော hypersexuality ဖြစ်နိုင်သည် uncharacteristic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာသူတို့ရဲ့ meds ချိန်ညှိခဲ့ကြသည် -until ။
မကြာခဏအော်ဂဇင်ပြုခြင်းကိုယနေ့အင်တာနက်၏အလွန်အမင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏အကူအညီဖြင့်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှု (fetish ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုမောင်းနှင်စေသော dopamine များပြားလာခြင်း) ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး နှောက်မြေပုံများကိုအမြဲတမ်းထားရှိသည်ဟုသံသယဝင်သော်နှစ်ပေါင်း ၂ ဝကြာညစ်ညမ်းဝါရင့်တစ် ဦး ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောခဲ့သည်။
ကိုယ့်ကိုမဆိုအရသာအမြဲတမ်း-ဒါမှမဟုတ်ဘာငါအလိုရှိကြသည်မယ်လို့အတူတူနေဖို့မယ်လို့ထင်ကြပါဘူး။ ငါ porn စွဲအတွက်ရှောက်သွားလေ၏မတူညီသောအဆင့်နှင့်အတူဆိုလို, အမှုအရာတွေအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်။ ငါ၏အ core ကိုဆွဲဆောင်မှုဘာတွေလဲ? ငါတောင်မှတော့ဘူးမသိရပါဘူး။ ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့ဤစွဲလမ်း၏ညစ်ညမ်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထဲကဖြစ်ရပြီပြီးနောက်သူတို့ကိုငါရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
သူမှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ် အော်ဂဇင်မှရှောင်ကြဉ်သည့်အချိန်ကာလသည်လူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး နှောက်မြေပုံများ (သို့မဟုတ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောမြေပုံများကိုဖော်ပြသည်) ကိုပြောင်းလဲစေသောအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူတွေကိုအထူးဂရုစိုက်ကြည့်ရှုနေတဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုပြောလိုက်တယ်။
ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးမလုပ်ဘဲဒီ ၁၀ ရက်ပဲကြာအောင်လုပ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့အရသာတွေပြန်ပြောင်းနေပြီလို့ယုံကြည်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်မဆွဲဆောင်တာကတော်တော်လေးကိုများတယ်။ ငါကctually တယ်လိပ်ပြာနှင့်အလိုအလျောက် arousal2နှစ်အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာရှာဖွေနေစဉ်! ငါသည်လည်းဗျာဒိတ်တော်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာရှိခဲ့သညျ။ ကြှနျတေျာ့အရသာအထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ဖို့ masturbating မှတဆင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်အေးစက်ခြင်းဖြင့်ခြယ်လှယ်ခဲ့ကြဖူးပါသလော
သူ၏အတွေ့အကြုံသည်သူမနှင့်စတင်စမ်းသပ်ပြီးနောက်သူမပြန်ပြောပြသောဤမိန်းမနှင့်ဆင်တူသည် karezza lovemaking။ လူကြီးအဖြစ်သူမသည်ထှတျအထိပျဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်အခါတိုင်းသူမ၏ဦးခေါင်းကိုအထဲသို့ပြေး ဝင်. သောညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်စိတ်ကူးယဉ်သူမတစ်ဦးကလေးအခါသူမ၏ကလေးအထူးကု snipping အချို့သောအရေး (သို့သော်ပုံနာကျင်နှင့်နှိုးဆွသောနှစ်ဦးစလုံး) လိင်အင်္ဂါ၏ထုတ်ကုန်လုပ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီဦးနှောက်မြေပုံကို၏အရင်းအမြစ်ကိုတွေ့ရှိခြင်းကို un-wire ကိုအသင်းမရကိုပြု၏။ တကယ်တော့သူမဟာသူမနှလုံး-ပိတ်ပွဲ, သူမ၏ဦးခေါင်း၌အပြေးနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းရုပ်ရှင်မပါဘဲနှိုးဆော်ခြင်းသို့မဟုတ် climaxed ဖြစ်လာခဲ့သည်ဘယ်တော့မှကဆိုသည်။ သူမချစ်ခြင်းမေတ္တာအောင်နှင့်အတူစမ်းသပ်စတင်ခဲ့သည့်အခါသူမ၏အံ့သြဖို့ မပါဘဲ ယင်းစိတ်ကူးယဉ်အလျင်အမြန်ပြန်သွားဘယ်တော့မှကုန်သည်ပန်းတိုင်အဖြစ်အော်ဂဇင်။
Doidge စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါဒီလူတွေဟာပြောင်းလဲမှုမြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုသံသယဖြစ်မိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအတူတကွကြိုးကိုင်နေတဲ့အာရုံခံတွေကိုစည်းမျဉ်းကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်လို့ပဲ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်မလိုလားအပ်သော၊ တင်းကျပ်စွာကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ထားသောအသင်းအဖွဲ့များနှင့်အတူအော်ဂဇင်စ်၏ခန္တာကိုယ်ကိုအချိန်အတန်ကြာဖယ်ရှားပေးသည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုအနုပညာဖြင့်ရရှိသောအသင်းအဖွဲ့များကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်သွတ်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့သည်။
စိတ္တဇရောဂါဆရာဝန် ဂျက်ဖရီ Schwartz OCD (obsessive-compulsive) လူနာများကို ဦး နှောက်ဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြင်ရန်ကူညီရန်အလွန်အောင်မြင်သောဤနည်းပညာဗားရှင်းကိုအသုံးပြုသည်။ မလိုချင်သောတွန်းအားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်တိုင်းလူနာသည်အခြားကြိုတင်ရွေးချယ်ထားသောအပြုသဘောဆောင်သည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုအာရုံစိုက်သည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့“ ကွဲလွဲနေတဲ့အာရုံခံဆဲလ်တွေ၊ ဆိုလိုသည်မှာအဓိက synapses လုပ်ဆောင်မှုကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှအာရုံကြောဆဲလ်ဆက်သွယ်မှုများသည်အားနည်းလာသည်။
အဘယ်အရာကိုဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဆိုလိုတယ်, အဘယ်သူကိုအဘို့, ထင်ရှားစေခြင်းငှါနေဆဲဖြစ်သည်။ ဥပမာ, ဥပဒ်မှတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်ဝယ်ယူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြမြေပုံများ-wire ကိုပြန်လည်ဤ technique ကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား Doidge တစ် bdsm အသိုင်းအဝိုင်း (ကျွန်ခံခြင်းနှင့် sadomasochism) ရက်နေ့မှာအမှုကိုပြုလေ့လာမှုတစ်ခုကဖော်ပြသည်။ ထိုသို့ထင်ရှား အားလုံး အဆိုပါ masochists ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းနာကျင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများခံခဲ့သည်။ ဤအလူကြီးများကသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာထိုကဲ့သို့သောအတွေ့အကြုံများ၏မရှိခြင်းအတွက်ဖြစ်ရပြီလိုဘယ်အရာကိုထွက်ရှာတွေ့နိုင်မလား? ထိုအမှုကြောင့်ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုမှဝယ်ယူမလိုချင်တဲ့အသင်းအဖွဲ့များ၏ဘာလဲ? (ထိုမလိုချင်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုမှ) အော်ဂဇင်မပါဘဲလိင်တဲ့ကာလတစ်ဦးနှောက် reboot, ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစောပိုင်းကဝါယာကြိုးနှင့်အတူ align ဖို့ခွင့်ပြုမလား?
orgasm ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်အလိုအလျှောက်မယ့်မြက်တစ်ဦးကိုလယ်ကိုဖြတ်ပြီးအများဆုံးတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းယူပြီးတူ, အဲဒါကိုအမြန်ဆုံးလမ်းကြောင်းကိုယူနိုင်အောင်ဖြားယောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မြက်ခင်းကျောကြီးထွားဖို့ခွင့်ပြုဘယ်တော့မှလျှင်, ငါတို့သည်ကြောင့်ကံကြမ္မာတစ် quirk အဖြစ်သက်သက်သာဖွဲ့စည်းခဲ့လျှင်ပင်အနည်းဆုံးခုခံ၏လမ်းကြောင်းကိုလမ်းလျှောက်စောင့်ရှောက်လော့။
လူသားများသည်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး နှောက်မြေပုံများကိုမလိုလားအပ်သောအပျက်အစီးများမှလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ လူများစွာသည်သူတို့၏ပလတ်စတစ် ဦး နှောက်ကိုသူတို့အမှန်တကယ်မလိုချင်သော Semi-အမြဲတမ်းအမှိုက်များဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းသည်မတော်တဆလူဘယ်နှစ်ယောက်၏မတော်တဆပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်ကိုစဉ်းစားခြင်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်။